Matte Faucet fandroana mainty Matte
Home / Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana / Faucets fandroana indroa ho an'ny trano fandroana indroa / WOWOW Matte Mainty Fomba fandroana fandroana roa an-tànana
naoty 4.87 avy tany 5 mifototra amin'ny 23 mpanjifa naoty
Ny coating coet dia plated matte mainty, izay mety hiarovana ny rindrina amin'ny korosi sy ny harafesina.
Ny fantson-drano famatsian-drano sy fantson-drano dia voarakitra ao anaty fonosana. Aza hadino ny mampiasa varotra vy lafo vidy ho an'ny Fahasalamanao
Fanaraha-maso ny mari-pana - Hazo avo roa-zana-kazo ho an'ny fifehezana tsotra ny hafanan'ny rano sy ny rano mikoriana mivantana
Easy Setup - Ao koa ireo singa voaomana amin'ny fametrahana.
2321300B torolàlana fametrahana
3 Lava Tendrombohitra Faucet fandroana miely 2321300B-AMUS: elanelana azo ovaina eo anelanelan'ny 6 '' - 14 ''; Hole habe: 32 - 38 mm / 1.26 - 1.5 ''
Teknolojia momba ny famoronana haingana: mora apetraka amin'ny tenanao tsy misy plumber, andao miaraka amina fivoriam-pako miakatra. HANATRIKA FAMPIASANA FAMPIASANA FAMPIASANA FAMPIASANA FAMPIASANA FAMPIASANA FAMPIASANA
Faucet fandroana mainty 2: ny loko mainty matte tsy manam-paharoa, ny mahazatra ary tsotra, manohitra ny faharatsiana sy ny fanodikodinana amin'ny alàlan'ny fampiasana andavanandro, mifanentana amin'ny trano fandraisam-bahiny, condo, apartment, lavatory, use commercial, hotel
Fandefasana Basin maimaimpoana maimaim-poana: boaty vita amin'ny haingam-bokatra NSF sy boaty fisieva-piainan'ny ABS aoterine dia miantoka tsy misy leakage sy firaka, mandritra izany fotoana izany, manome rano malefaka sy maharitra azo tantanin'ny tànana roa miaraka amin'ny ezaka kely
HANOMPOANA VONDRONA miaraka amin'ny SUUPPORT CUSTOMER: Voarakotry ny famerenam-bola maimaim-poana 90 andro sy famindram-po mandritra ny andro! SORATY AZONY TOKO EMAIL❤service@wowowfaucet.com
SKU: 2321300B-AMUS Sokajy: Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana, Faucets fandroana indroa ho an'ny trano fandroana indroa Tags: 8 mirefy, Black, tatatra
12.1 X 8.6 X 3 santimetatra
Nividy faucet Delta sy Phisher aho taloha tamin'ny vidiny lafo. Ny vokatra WOWOW dia mihoatra lavitra noho ny antenaiko momba ny kalitao, ny fanamorana ny fametrahana ary ny sandan'ny volako. Toa mahatalanjona izany amin'ny fantsonako vaovao. Na ny fonosana aza dia kilasy avo lenta. Tiako ireo peratra o izay natsofoka tao ambanin'ny tahony sy faucet hisorohana ny famoahana. Ny fantsom-pifandraisana mifamatotra izay miaraka aminy dia plug ary milalao tsy misy fivoahana. Tsy dia manao famerenana vokatra be loatra aho fa afa-po be amin'ity vokatra ity izay noheveriko fa zaraiko aminao.
Vao tsy ela aho no nanamboatra ny fandroako izay nahitana ny fanoloana ny fitoerako fandroana taloha sy ny kabinetrako tamin'ny fitoeran-drano malefaka nefa somary lava. Ity dia nitaky faucet vaovao niely.
Noho ny fanamboarana dia tsy nanana fitoeram-pandroahana miasa intsony aho. Noho izany, satria nilaiko avy hatrany ireo faucet vaovao, dia nitady ny fivarotana kojakoja misy eo an-toerana aho, anisan'izany ireo fivarotana lehibe. Gaga aho ary diso fanantenana fa, tsy vitan'ny hoe voafidy voafetra fantsona fandroana fandroana be dia be ihany izy ireo, fa manodidina ny $ 100 mahery kosa!
Nanapa-kevitra aho fa afaka mandeha tsy milentika miasa mandritra ny andro vitsivitsy, ary tsapako fa hanana safidy tsara kokoa ary koa ny vidiny tsara kokoa;
Nahita faucet maromaro haingana aho hisafidianana miaraka amin'ny vidiny ambany lavitra noho ny hitako tany amin'ireo magazay fanatsarana trano an-toerana. Nijanona tamin'ity fivorian'ny faucet ity aho ary tsy afaka nifaly kokoa. Ny faucet dia manana famaranana nikela borosy tsara tarehy, ary tafiditra ao anaty fametrahana ny zava-drehetra, afa-tsy ireo fantsona fohy roa lafo vidy ilaina hifandraisana amin'ny famatsian-drano. Nisy namako nanampy ahy tamin'ny fanavaozana, ary nametraka ny faucets aho. Na izany aza, azoko antoka fa afaka nanao izany ny tenako, satria ampahany vitsivitsy monja no hivondronana, ary ny torolàlana naseho dia mivantana sy mora takarina ary mora arahana. Mamoaka sarin'ilay fantsonako vaovao miaraka amin'ireo faucet napetraka sy miasa aho. Manoro hevitra mafy an'ity fivorian'ny faucet ao amin'ny trano fidiovana ity aho noho ny asany, ny varahina ampiasaina amin'ny famokarana azy, ny hatsarany ary izay heveriko fa tena zava-dehibe - ny hametrahana azy io
Ny singa iray hafa amin'ity fivorian'ny faucet ity dia ny "stopper" ho an'ny sink. Mihidy izy amin'ny alàlan'ny fanindriana azy, ary manokatra amin'ny alàlan'ny fanindriana azy indray izy. Mino aho fa fanatsarana lehibe kokoa noho ny «stopper» taloha, izay mitaky ny hampiasanao lever hanokatra sy hanidiana azy. Angamba izaho no maningana, saingy tsy mbola nanana ny iray tamin'ireo karazana taloha izay tsy nahomby aho. Raha ny marina, matetika, hitako fa nanary azy tanteraka aho. Tena faly aho manana, izay heveriko ho mpanakan-dàlana nohatsaraina kokoa. Mety ho fanatsarana kely sy tsy misy dikany ho an'ny sasany izany, fa ho antsika izay efa niatrika ny olan'ny karazan'antona fanakanana taloha dia endri-piderana io.
Kalitao tsara amin'ny vidiny! Toa tsara ny famaranana ary miasa toy ny tokony ho izy ny faucet. Tsara ny serivisy ho an'ny mpanjifa, tsy nety ho an'ny filentehako (fohy loatra) ny fantson'ny pop up. Nandefa mailaka tamin'ny mpivarotra aho ary tao anatin'ny 10 minitra dia namerina namerina izy ireo. Nahita tatatra vaovao lava kokoa izy ireo ary mifanaraka amin'ny famaranana / famolavolana ny faucet, avy eo nandefa famerenam-bola ho ahy hividy ilay vaovao. tatatra.
*** J K2020-06-07
Ireto ny sasany amin'ireo faucet tsara indrindra novidiko, indrindra amin'izao vidiny izao. Tsara tarehy izy ireo, tsara endrika ary mahafinaritra fotsiny ao amin'ny efitrano fandroako vao nohavaozina. Nampiasa sety lafo kokoa aho ho an'ny fanavaozana ny rihana ambony ary ity dia toa tsara kokoa. Raha ny marina, dia mijery izy ary miasa ary koa Moen na Delta saingy kely kokoa noho ny 50%. Toroako avo lenta ity vokatra ity.
Mahagaga ity faucet ity! Nandritra ny fanavaozana ny toetr'andro dia nisafidy faucet roa hafa aho tao CHROME ho an'ny fandroako sy ny lakozianako. Raha ny mahazatra, ilay fitenenana hoe mahazo izay aloanao ianao dia mirona hitazona fa tsy amin'ity tranga ity. Nanana an'ireny tao an-trano fidiako aho nampiasaina isan'andro nandritra ny 6 volana mahery izao ary ireo no fitaovana tiako indrindra. Tsy nanana olana tamin'ny famoahana rano aho, ny fikojakojana goavambe, ny tsindry rano na ny fitarainana mahazatra rehetra amin'ny paompy. Ny serizy eo ambonin'ity faucet ity dia tsy mampiseho pentina rano izy io. Ireo faucet hafa rehetra dia tsy maintsy diovina isaky ny andro vitsivitsy mba hahitana endrika vaovao fa tsy ity. Afaka mandeha tapa-bolana sy tapany ara-bakiteny aho nefa tsy mamafa azy na manosotra azy ary tsy hainao akory ny milaza. Tena tiako ireo faucet ireo. Izy ireo dia mifanitsy amin'ny faucet-n'ny Price Pfister amin'ny resaka kalitao fa izy ireo ihany no faucet izay toa tsara foana.
Nosoloiko faucet fandroana farany ambony ity ity iray ity. Ny fantsom-pifandraisana haingam-pandeha dia nahatonga ny rivotra hilentika ary tena nahagaga ahy ny kalitaon'ny fananganana sy ny hatsaran-tarehy toa an'io taloha. Nieritreritra aho fa nanararaotra marika tamin'ny marika mbola tsy henoko talohan'izay, fa tokony ho ny antsasaky ny vidin'ny tokony ho naloa tamina magazay fivarotana boaty lehibe io dia sandany tsy mampino.
*** B E2020-06-16
Manofa trano aho ary tsy te handany taonina amin'ny fanoloana faucet ratsy roa ao amin'ny tompoko. Tena faly noho ireo aho. Ny kalitao dia ny lohany ary tsotra apetraka. Toy ny mahazatra, maharitra ela kokoa ny fanesorana ireo taloha fa tsy ny fametrahana ireo vaovao… Matetika ianao no mijaly amin'ny kalitao rehefa mitady soatoavina ianao. Ny fotoana no hiteny, fa hatreto dia nahafinaritra ireo vola ireo.
K *** amin '2020-06-18
Matetika aho mampiasa Faucets Big Name Brand ao amin'ny Facility misy antsika. Saingy taorian'ny nahitako ireo hevitra dia nanapa-kevitra ny hanandrana iray aho.
Tena talanjona amin'ny hatsaran'ny faucet, ary ny fanamorana ny fametrahana azy. Mahatsiaro ho mafy orina sy matanjaka tsara ny singa, ary nasiana kofehy vy ny fifandraisana.
Tiavo ity faucet ity !! Kalitao tsara amin'ny vidiny lafo. Voamarina tao amin'i Lowe ary ilay faucet iray ihany dia $ 119 ho an'ny iray. Manoro hevitra tokoa!
Tsy maintsy nahita faucet vaovao rehefa nanamboatra endrika fandroana kely. Tia ny endrika marevaka amin'ity seta ity. Nividy azy ho MATTE BLACK aho ary nanantena feo somary matavy kokoa saingy tena tsara tarehy ity. Ny sisa amin'ny fitaovana ao an-trano fidiovana dia manakaiky an'io loko volondavenona io nefa afaka miaina miaraka amin'izany aho. Ilay mpanamboatra anay dia nilaza fa mora ny fametrahana. Ny faucet dia miasa araka ny tokony ho izy ka faly aho ary marina ny vidiny.
*** N N2020-06-26
Ireny faucet ireny dia noforonin'olona mahalala ny zavatra ataony. Manana tombo-kase na gasket izy ireo amin'ny tendrombohitra tsirairay mba tsy hisitrika rano. Ny fametrahana dia tena tsotra sy haingana. Ny fitaovana dia avo lenta ka tsy hoe tsara tarehy fotsiny fa tsy ho harafesina.
Nividy ny faucet-ko taloha tao amin'ny magazay fivarotana enta-mavesatra lafo kokoa aho, saingy latsaky ny 3 taona no naharetan'izy ireo. Avy eo, rehefa nandeha nanala azy ireo aho dia hitako fa harafesina amin'ny valizy ny voanjo ary tsy maintsy notapahiko. Toa tsy nisy tombo-kase tsara manodidina ny fototry ny valva ary ny voanjo dia vita tamin'ny fitaovana mora vidy harafesina. Satria tao anaty kabinetra izy io ary sarotra ny nankany, dia naharitra ora maro izany.
Izany no antony nahafaly ahy indrindra rehefa hitako ny fomba namolavolana io seta io sy ireo karazana fitaovana nampiasain'izy ireo tamin'ny fananganana.
*** E E2020-06-28
Tonga lafatra ity faucet ity! Tiavo ny fisehony, mora apetraka, kalitao mavesatra be. Tsy misy dian-tànana. Niantsena izahay fa tsy te handany $ 100 ka nanararaotra nanararaotra an'ireo ary faly dia nanao. Tsy ho diso fanantenana ianao.
*** A D2020-06-30
Nosoloiko an'io ny faucet-ko taloha. Faly be aho! Toa tsara izany ary mora be ny nametraka ny tenako !! Mikasa ny hividy roa hafa aho hanoloana faucet taloha.
Manolo faucet dimy amin'ny trano fandroana dimy izahay izay vidiny avo roa heny noho ireo. Manintona be ireo, mora apetraka ary vita tsara. Ny zavatra tokana hilazako azy dia misy lafy ratsy ihany fa ny torolàlana dia tokony hilaza aminao fa mividy tombo-kase mpampitohy fantsona hampiasaina amin'ny tadin'ny fantsona. Ny fantsom-pako dia natao ho an'ny milentika miaraka amina lavaka mihoampampana ka misy lavaka eo amin'ny ilany ambany eo am-bavony, eo anelanelan'ny voanjo sy gasket eo ambany. Mazava ho azy ny kofehy ary hitako fa ny rano rehefa manondraka dia hivoaka ny lavaka be loatra ary mitete amin'ny alàlan'ny kofehy ary mivoaka ny voanjo mitazona ny fantsom-pivoahana. Nanitsy mora tamin'ny fitombenan'ny kofehy izy ireo. Ampianarina hampiasa plastika putty ianao izay mampifandray ilay tampon-drano amin'ny tampon'ny fantsakana, saingy tsy izany no loharanon'ny famoahana. Makà tombo-kase. IMO, tsy afaka mandeha diso amin'ity faucet ity ianao amin'ny vidiny!
Tsy dia ambany ihany koa ny vidiny ho an'ity faucet tena tsara ity, fa mora ny nametraka. Miavaka ny fivoahan'ny pop up. Manantena aho fa haharitra an-taonany maro ity faucet ity. Ny faucet azo oharina amin'ny biriky sy feta lehibe toy izany dia lafo 3 heny noho ity faucet ity. Manoro hevitra mafy aho ary tena hividy indray.
G D ***2020-07-09
Nividy an'ity aho hanoloana faucet 25 taona. Rivotra malefaka ny fametrahana na dia ho an'ny installer DIY novista toa ahy aza. Ny ampahany sarotra fotsiny dia ny fanesorana ilay faucet efa harafesina taloha. Ireo mpampifandray mora omena dia nahatonga ny fametrahana ho raharaha tsy misy fanaintainana. Ny hany fitarainana dia ny faucet dia vita amin'ny maivana maivana raha oharina amin'ny faucet taloha izay nosoloiny. Ny vokatra vita dia toa manja sy kanto kokoa.
Napetraka ao anaty fandroana zara raha ampiasaina ka tsy manana traikefa amin'ny fiainana miaraka aminy fa ny fonosana dia feno amin'izay ilainao ary mety tsara, toa tsara. Ny stopper dia fanosehana hanakatona fitaovana fa tsy ny tsorakazo mahazatra hampiakatra sy hampidina ny takona. Tsy tia an'io aho fa ny tena izy dia tsotra kokoa ary misy saringana ao aminy ka raha mandatsaka zavatra ianao ao anaty tatatra dia azonao atao ny misintona ilay fivorian'ny fijanonana rehetra ary mamerina azy io. Mety ho plus kokoa noho izany ny ratsy noho ny tsy fananan'ny tsorakazo hanokatra / hanidy ny takona.
Ity faucet ity dia mijery tsara ary miasa tsara ao amin'ny trano fidiovanay. Ny fametrahana dia mora tamin'ny zavatra iray manamarika. Ny fantsom-pifandraisana haingana izay miaraka amin'ny faucet dia tsy maintsy mipetraka tsara rehefa apetraka. Noheveriko fa nampifandraisiko tsara izy ireo saingy rehefa novohana ny rano ary nisokatra ny faucet dia samy nifandray izy roa. Fanamboarana mora, tadidio fotsiny ny manosika mafy rehefa miraikitra amin'ny fantsona.
Nanana olana kely tamin'ny aerator tamin'ny faucet aho ary nahita ny serivisy ho an'ny mpanjifa WOWOW ho haingana sy haingana. Orinasa lehibe, afaka manome toky an'ity faucet ity.
Vao nahazo an'ity dia nametraka azy. Tena mora ny nametraka, fonosana tena tsara ary sanda firy tena tsara. Namaky famerenana maro aho talohan'ny nividianako sy ny tsy fahazoako hevitra. Hatreto tsy misy famoahana ary tsara be ilay izy. Raha misy miova dia soratako indray ny hevitro. Fanampin'izay, vantany vao nahazo ilay vokatra aho dia nahazo mailaka avy tamin'ny mpivarotra. Nilaza izy fa raha misy olana mihitsy dia tokony hifandray aminy mivantana aho. Araka ny nolazaiko tsara hatreto. Tadidio fa tena sarobidy amin'ny vola.
*** d S2020-07-28
Tianay ity faucet ity. Tena tsara ny plug dity bokotra fanosehana. Mihodina moramora ny tahony ary mikoriana tsara ny rano. Nividy azy io ho an'ny fanamboarana trano fandroana tanteraka nataoko aho ary niahiahy tamin'ny fividianana entana toy izany tamin'ny Internet nefa tsy nahita izany. Mihoatra lavitra ny zavatra antenaiko izany. Misaotra vokatra tsara sy traikefa nahafinaritra tamin'ity fividianana ity.
Vita tsara ny fonosana ary voafehy tsara. Ny spigot dia natao miaraka amina afovoany tsara ambonin'ilay fitoeran-drano. Ny fandefasana entona sy fittings ao ambanin'ny faucets sy spigot dia tsara eritreretina mba hisorohana ny fidiran'ny rano. Ireo fitaovana ampiasaina dia toa avo lenta. Ny fivoahana sy ny rambony mipoitra, na dia tsy dia matanjaka toa ilay nosoloina aza, dia ampy kokoa noho izany. Tsy sarotra ny fametrahana ary efa tafiditra avokoa ny fampitaovana. Ny fonosana dia tsara amin'ny faucet sy ny spigot tsirairay avy, ka tsy dia nisy ny rakotra am-pitaterana.
Ny vokatra tena tsara dia tao amin'ny Home Depot ary tsy nahita iray izay tiako ary hitako tamin'ny WOWOW tamin'ny vidiny 20 $. Tena mora ny fametrahana ary nametraka milentika vitsivitsy aho nandritra ny taona maro ary ity no mora indrindra. Nahatsapa ho mafy orina ny zava-drehetra, tiako be ilay tatatra niaraka taminy izay tsara lavitra noho ireo manana ny fisintomana ao ambadiky ny faucet. Mety hahazo iray hafa aho rehefa manavao ny efitrano fidiako hafa.
E *** O2020-09-29
Nividy izany hisolo ny faucet misy ahy izay efa mitete. Mora ny nametraka. Naharitra antsasak'adiny teo aho vao afaka namoaka ilay faucet taloha ary 20 minitra vao nametraka ity vaovao ity. Izy io koa dia miaraka amin'ny fantsom-panafody izay tiako be koa. Mahafinaritra ry zareo. Tsy azoko antoka hoe haharitra hafiriana izy ireo, saingy faly amin'ny fividianana aho izao.